Osteoarthritis (အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Osteoarthritis (အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း)
Osteoarthritis (အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း) ကဘာလဲ။
အရိုးအဆစ်ယောင်ခြင်းသည်အဖြစ်များသော အဆစ်ယောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆစ်နှစ်ခုကြားရှိ အရိုးနုပျက်သွားသောကြောင့် နာခြင်း တောင့်တင်းခြင်း ဖောင်းခြင်းများဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ လက် ဒူးခေါင်း တင်ပါးနှင့် ကျောရိုးတွင်ပို၍ဖြစ်တတ်သည်။
Osteoarthritis (အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာအလွန်အဖြစ်များပါတယ်။ နိုင်ငံအဆစ်ကြွက်သားနှင့် အရေပြားဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှ အသက် လေးဆယ့်ငါးမတိုင်ခင်ထိ ယောက်ျားလေးတွင်ပိုဖြစ်တတ်ပြီး လေးဆယ့်ငါးကျော်ပါက မိန်းကလေးတွင်ပိုဖြစ်တတ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ မည်သည့်အသက်အရွယ်တွင်မဆိုဖြစ်တတ်သည်။ အသက် ခြောက်ဆယ့်ငါးကျော်လျင်ပိုဖြစ်တတ်သည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါသည်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Osteoarthritis (အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
နာခြင်းတောင့်တင်းခြင်း။ အဆစ်များတွင် နာခြင်းတောင့်ခြင်းများအဓိကဖြစ်တတ်သည်။ မနက်ပိုင်းနှင့် အနားယူပြီးအချိန်တွင်ပိုဖြစ်တတ်သည်။
Osteoarthritis (အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အဆစ်အားအုပ်ထားသော အရိုးနုပြတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရိုးနုဆိုသည်မှာ မာ၍ ရာဘာပုံစံအရာဖြစ်ပြီး အရိုးအဆုံးများကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ အဆစ်နှင့် အရိုးအား လွယ်ကူစွာလှုပ်ရှားနိုင်အောင်ကာကွယ်ပေးထားသည်။ အရိုးအဆစ်ယောင်ခြင်းတွင် အရီုးနုအကာသည် ကြမ်းလာသည်။ လုံးဝပြတ်သွားပါက အရိုးအဆစ်ယောင်သောလူနာတွင် အရီုးနှစ်ခုပွတ်တိုက်နေလိမ့်မည်။
Osteoarthritis (အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အရိုးအဆစ်ယောင်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက်ကြီးခြင်း -ဤရောဂါသည် အသက်ကြီးတွင်ဖြစ်သောရောဂါဖြစ်သည်။
အဝလွန်ခြင်း- ဝခြင်းဖြင့် ဒူးခေါင်း တင်ပါးတို့အားဖိအားများစေသည်။ အဆီတစ်သျူးများခြင့်းက ယောင်စေသော ပစ္စည်းများထုတ်စေပြီး အဆစ်အားယောင်စေသည်။
ထိခိုက်မိခြင်းနှင့် အသုံးများခြင်း။ အားကစားမှ သို့မဟုတ် မတော်မဆဖြစ်ခြင်းမှရလာသောဒဏ်ရာများသည် ရောဂါပို၍ဖြစ်စေသည်။ အကြာကြီးမတ်တပ်ရပ်ရသော ခဏခဏ ကိုင်းရသော ၊ အလေးအပင်အကြီးမရသော အလုပ် သို့မဟုတ် အခြားလှုပ်ရှားမှုများက အရိုးအဆစ်ယောင်ခြင်းကိုတဖြည်းဖြည်းဖြစ်စေတတ်သည်။
မျိုးရိုးဗီဇ တချို့သူများ၏ဗီဇသည် အရိုးအဆစ်ယောင်ခြင်းကိုပို၍ဖြစ်စေတတ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သော ရှားပါးသည့်အခြေအနေတခုမှာ အရိုးနု ပြုလုပ်ပေးသော ပရိုတင်းချို့တဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
Osteoarthritis (အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဆရာဝန်မှ ရောဂါလက္ခဏာများကိုလေ့လာခြင်းနှင့် စမ်းသက်ခြင်းများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အတည်ပြုနိုင်ရန် စစ်ဆေးခြင်းများလည်းပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့် ပျက်ဆီးမှုမည်မျှရှိသည်ကိုသိနိုင်သည်။ အရိုးအဆစ်ယောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာသောအခြားပြောင်းလဲမှုများကိုလဲတွေ့နိုင်သည်။
သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုဖြင့်ပုံရိပ်ဖမ်းခြင်း ရောဂါသေချာရန်မလိုအပ်သော်လည်း ရှုပ်ထွေးသောကိစ္စများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။
သွေးစစ်ခြင်း။ အခြားအကြောင်းများကြောင့် အဆစ်နာခြင်း ဟုတ်မဟုတ်ကို သိနိုင်သည်။ ဥပမာ ရူမတွိုက်အဆစ်ယောင်ခြင်း
အရိုးအဆစ်အရည်အားလေ့လာခြင်း။ ဤသို့စမ်းသက်ခြင်းဖြင့် ယောင်နေခြင်းရှိမရှိနှင့် လေးဖက်နာသို့မဟုတ် ရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုသိနိုင်သည်။
Osteoarthritis (အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အရှင်းပျောက်အောင်ကုရန် နည်းလမ်းမရှိသော်လည်း ရောဂါလက္ခဏာသက်သာစေရန်နည်းလမ်းများရှိပါသည်။ အဓိကနည်းလမ်းမှာ
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း။ နာနေချိန်လှုပ်ရှားရန်ခက်ခဲသော်လည်း လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ခြင်းသည် အရေးပါသောကုသမှုတွင်ပါဝင်နေသည်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အားတက်ကြွစေသည်။ ကြွက်သားတည်ဆောက်မှုကိုကောင်းစေသည်။ အဆစ်များအားသန်မာစေသည်။ ထိုကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာကိုသက်သာစေသည်။ သင့်၏ဆရာဝန်မှအိမ်တွင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမည့်ဇယားကိုပေးလိမ့်မည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် လေ့ကျင့်ခန်းအများကြီးလုပ်ခြင်း လေ့ကျင့်ခန်းအမြန်လုပ်ခြင်း နှင့်မမှန်ကန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများကလည်းအဆစ်ကိုထိခိုက်စေတတ်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်း။ အရိုးအဆစ်ယောင်ခြင်းအတွက် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်းသည် နာကျင်မှုကိုသက်သာစေရုံသာမက အဆစ်ပျက်ဆီးခြင်းကိုပါသက်သာစေသည်။ ဆရာဝန်မှ ဖြည်းဖြည်းနှင့်မှန်မှန်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချပုံကိုပြောလိမ့်မည်။
အနာသက်သာစေသောဆေး။ အနာသက်သာစေသောဆေးများတွငင် အက်စီတာမီနိုဖန်၊ဘိန်း မှထုတ်သောဆေး နှင့် အခြားဆေးဖြစ်သည့် ထရာမဒေါတို့ဘာဝင်သည်။ ဤဆေးများသည် ဆေးဆိုင်တိုင်းတွင်ဝယ်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်လိုအပ်လိမ့်မည်။
စတီးရိုက်မပါဝင်သောအယောင်ကျဆေးများ ဥပမာ သွေးကျဲဆေး အိုင်ဗျူပရိုဖန် နာပရိုဇန် နှင့် ဆယ်လီကိုးဇစ်၊ သင့်အဆစ်များကို အနာသက်သားစေရန် အယောင်သက်သာစေရန်အသုံးများသောဆေးဖြစ်သည်။ အချိုံဆေးများသည် လိမ်းဆေးပုံစံရတတ်ပြီး ဖြစ်သောအဆစ်တွင် တိုက်ရိုက်လိမ်းနီုင်သည်။
ကော်တီကိုစတီးရိုက်။ ကော်တီကိုစတီးရိုက်ဆေးအား တနစ်အတွင်း သုံးခါထက်ပိုထိုးခြင်း ၊ သုံးလမခြားဘဲဆေးထပ်ထိုးခြင်းများလုပ်ပါက ရောဂါပိုဆိုးစေတတ်သည်။
ဟိုင်ရာလူရိုနစ် အက်စစ်။ အဆစ်ကြားတွင်ရှိသောအရည်ဖြစ်ပြီါ်ချောဆီ ၊ တုန်ခါမှုကိုထိန်းခြင်းဖြစ်အလုပ်လုပ်ပေးသည်။ ထိုအရည်အားထိုးသွင်းခြင်းဖြင့် ပွတ်တိုက်မှုအားလျော့စေပြီး အနာသက်သာစေသည်။
ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ခြင်း။ ဆိုးဝါးစွာထိခိုက်နေသော အဆစ် များသောအားဖြင့် ပေါင်နှင့်ဒူးခေါင်း ကိုပြန်ပြင်ခြင်းသို့မဟုတ် အစားထိုးခြင်းလုပ်နိုင်သည်။ ရောဂါကလက္ခဏာများကိုသက်သာစေခြင်း လှုပ်ရှားမှုပိုလုပ်နိုင်ခြင်းနှင့် ဘဝအားပိုနေပျော်စေသည်။
အပ်စိုက်ကုထုံး။ အချို့သောလေ့လာချက်များအရ ဒူးခေါင်းအရိုးအဆစ်ယောင်ခြင်းတွင် အနာကိုလဲသက်သာစေပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ပိုကောင်းစေသည်။
ဖြည့်စွက်စာများ ဥပမာ ဂလူကိုစာမင်း နှင့် ကွန်ဒရိုတင်။ အချို့လေ့လာချက်များတွင် ဤဖြည့်စွက်စာများသည် ကောင်းကျိုးဖြစ်စေသည်ဟု ဆိုသော်လည်း အများကစိတ်ကျေနပ်စေရန်သက်သက်ပေးသော အရာဟုသာဆိုသည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက အရိုးအဆစ်ယောင်ခြင်းကိုကုသရာမှာဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် အရိုးအဆစ်ယောင်ခြင်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း။ အရိုးအဆစ်ယောင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးဆရာဝန်မှ လုပ်သင့်သော ဇကားကိုပြောပြပေးပါလိမ့်မည်။
ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ချခြင်း။ အလေးချိန်လျော့ချခြင်းဖြင့် နာကျင်ခြင်းနှင့် အဆစ်အားပိုပျက်ဆီးစေခြင်းအားသက်သာစေသည်။ အစားအသောက်ပညာရှင်နှင့် ကျန်းမာအောင် မည်သို့စားသောက်ရမည်ကိုတိုင်ပင်သင့်သည်။
အပူနှင့်အအေးကိုအသုံးပြု၍အနာသက်သာအောင်လုပ်ပါ။ နှစ်ခုလုံးကသက်သာစေပါသည်။ အပူသည် တောင့်တင်းခြင်းအားသက်သာစေပြီးအအေးသည် ကြွ့က်တတ်ခြင်းနှင့် နာကျင်ခြင်းတို့အားသက်သာစေနိုင်သည်။
အကူအညီပေးသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြု၍ လုပ်ဆာင်မှုနှင့် လှုပ်ရှားမှုလုပ်ဆောင်နိုင်အောင်အကူအညီပေးလိမ့်မည်။ဥပမာစကူတာစီးခြင်း လမ်လျောက်ခြင်း ဖိနပ်ထောက်ပံသောပစွည်းများစသည်……
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 2, 2018 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 22, 2018
Reference: Accessed January 06, 2017
Osteoarthritis. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/osteoarthritis/home/ovc-20198248Accessed January 06, 2017
Osteoarthritis. http://www.nhs.uk/Conditions/Osteoarthritis/Pages/treatment.aspxAccessed January 06, 2017
Osteoarthritis. http://www.arthritis.org/about-arthritis/types/osteoarthritis/Accessed January 06, 2017
What is Osteoarthritis? http://www.healthline.com/health/osteoarthritis#Long-TermOutlook5Accessed January 06, 2017